स्वास्थ्य Archives - S Khabar
दाँत स्वस्थ र चम्किलो बनाउँने घरेलु उपाय
किन हुन्छ मुखको क्यान्सर ? यी हुन्, बच्ने उपाय
थाहा पाउनुहोस पानी पिउँदाका फाइदा
पानी, जिन्दगानी ! जीवित प्राणीका लागि पानी नभइ नहुने अति आवश्यक ‘तत्व’ हो । मानवीय स्वास्थ्यका लागि पानी लाभदायक पनि छ । उपयुक्त तरिकाले पानी पिउने बानीको विकास भयो भने रोग टाढा भाग्ने र सामान्य रुपमा डाक्टरलाई भेट्न जानै नपर्ने अवस्था…
मानिसको उमेर वृद्धिसँगै स्मरण शक्तिमा समेत कमी आउने गर्दछ । यसलाई सामान्य मानिन्छ । तर आजकल कतिपय युवा उमेरकै मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर हुने गरको छ । यसको पछाडि भने धेरै कारणहरु रहने गरेका छन् । आजकल मुख्यतयाः दैनिक जीवनयापनका क्रममा…
सामान्यतयाः १ वर्षमा बच्चाले बोल्छन्, नबोले के गर्ने ?
मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रमको एक महत्वपूर्ण पाटो हो– भाषा तथा बोली विकास । शारीरीक विकाशसंगै बोलीको पनि विकास हुने भएकाले मानिसहरुबीच भावना व्यक्त गर्ने भरपर्दाे माध्यम बोली नै मानिन्छ । सामान्यतया बच्चाहरुमा १ बर्षको उमेरपछि बोली…
काठमाडौं– नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने पदमचालबारे धेरैलाई थाहा नहोला । यो एक किसिमको जडीबुटी हो । आयुर्वेदमा यसलाई निकै महत्वका साथ लिइन्छ । नेपालको ३००० मिटर देखि ४००० मिटर सम्मको हिमाली भेगमा पदमचालका विरुवाहरु आफै उम्रिएका हुन्छन् ।…
जाडो मौसम छालाका लागि अनुकूल समय मानिँदैन । त्यसैले जाडोको मौसम शुरु भएसंगै छालामा सुख्खापना बढ्दै जान्छ । जाडो मौसममा बाहिरी वातावरण सुख्खा हुने भएकाले हाम्रो छालामा पनि त्यसको असर देखा पर्छ । यसरी चिसो मौसममा छालामा विभिन्न समस्याहरु…
जसले हाँस्न जान्दैन, उसले बाच्न पनि जान्दैन भन्ने उखान सबैले सुन्नु भएकै होला । हाँस्ने बानी सबैको हुन्छ । दिनमा कति र कुन समयमा हाँस्ने भन्ने नियम छैन । कुनै रमाइलो कुरामा जिस्किदा, साथीहरुबीच ठट्ठा गरेर कुराकानी गर्दा वा चुड्किला…
ग्यास्टिकको घरेलु उपचार
सांकेतिक तस्वीर खानपानमा ध्यान नपुग्दा शरीरमा धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ । खानपानकै कारण अधिकांश नेपालीमा पेटसम्बन्धी रोग छ । त्यसमा पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या धेरैमा छ । अधिकांश नेपालीलाई पीडित बनाउने ग्यास्टिकलाई घरेलु उपचार र…
मुखको क्यान्सर महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखिन्छ । मुखमा हुने तन्तुको कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा वृद्धि भएमा मुखको क्यान्सर हुने गर्छ । मुखको क्यान्सर ओठ, जिब्रो, जिब्रोमुनिको भाग, गालाको भित्री भार र तालुमा हुने गर्छ । कोषहरु अनियन्त्रित…
भुलेर पनि सँगै नखानुस् यी खानेकुरा, पुर्‍याउँछ गम्भिर असर
सामान्यतया हामीले खाने अधिकांश खानेकुरामा कुनै न कुनै पोषकतत्व पाइने गर्छ । त्यसले हाम्रो शरिरलाई फाइदा गर्छ । तर व्यक्ति र उसको शरीरमा भएको रोग अनुसार सबैलाई सबै कुराले फाइदा पु¥याउँछ नै भन्ने छैन । यहाँ हामीले केही खानेकुराहरु उल्लेख…
प्रायः भान्सामा प्रयोग हुने टिमुरबारे सवै परिचित भए पनि यसमा पाइने औषधीय गुणका विषयमा जो कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ । जाडो मौसममा टिमुरको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । यसले वाह्य तापमानसँग शरीरको सन्तुलन मिलाउन मदत गर्छ । साथै…